Fandalinana momba ny neurolojia amin'ny fampiasana sary vetaveta - The Reward Foundation
Home Fandinihana momba ny fandinihan-tena amin'ny fampiasana Porn
Ny mpahay siansa dia nampiasa fandalinana neolojika hijerena ny vokatry ny sary vetaveta amin'ny fampiasana fitaovana ao anatin'izany ny fMRI, MRI ary EEG. Namorona fanadihadiana neuro-endocrine sy neuro-pyschological koa izy ireo. Ity pejy ity dia namboarina tamin'ny Yourbrainonporn.com. Tsidiho azafady Yourbrainonporn.com raha mila fampahalalana lalina kokoa momba ny fikarohana farany momba ny vokatry ny fampiasana sary vetaveta ianao.
Ny fandalinana neurolojia etsy ambany dia voasokajy amin'ny fomba roa. Voalohany amin'ny fiovan'ny ati-doha mifandraika amin'ny fiankinan-doha dia notaterina tsirairay avy. Ireto ambany ireto ihany ireo fandalinana ireo dia voatanisa amin'ny datin'ny famoahana, miaraka amin'ny sombiny sy fanazavana.
Lisitry ny fiovan'ny ati-doha mifandray amin'ny fiankinan-doha: Ny fiovana amin'ny ati-doha lehibe efatra dia entin'ny fiankinan-doha George F. Koob ary Nora D. Volkow ao amin'ny fanamarihan-tsainy. Koob no Tale ao amin'ny Ivon-toerana Nasionaly momba ny fanararaotana ny toaka sy ny toaka (NIAAA), ary i Volkow no talen'ny Ivon-toerana Misahana ny Fanafody (NIDA). Navoaka tao amin'ny The New England Journal of Medicine: Fampandrosoana ny neurobiolojika amin'ny modelin'ny atidoha mampiakatra ny aretina (2016). Ity lahatsoratra ity dia mamaritra ny fiovan'ny ati-doha amin'ny ankapobeny misy ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fiankinan-doha amin'ny fihetsika, raha milaza ny fehintsoratr'izy io fa misy ny fiankinan-dohan'ny firaisana:
"Mihevitra isika fa mbola manohana ny atidoha amin'ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha ny neuroscience. Ny fikarohana momba ny neuroscience ao amin'io faritra io dia tsy manome fahafahana vaovao ho an'ny fisorohana sy fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny fiterahana sy ny fiankinan-doha amin'ny fihetsika (ohatra, ho an'ny sakafo, firaisana ara-nofo, ary filokana) .... "
Ny taratasy Volkow & Koob dia nanoritsoritra ny fiovan'ny ati-doha efatra nateraky ny fiankinan-doha, izay: 1) fanentanana, 2) Desensitization, 3) Dysfunctional prefrontal circuits (hypofrontality), 4) Ny tsy fahombiazan'ny tosidra. Ny 4 momba ireo fiovana ao amin'ny atidoha ireo dia voamarina eo anivon'ireo fandinihana maro avy any amin'ny oniversite voatanisa amin'ity pejy ity:
Tatitra momba ny fianarana fanentanana (cue-reactivity & faniriana) amin'ny mpampiasa pôrnôgrafia / mpidoroka firaisana ara-nofo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Tatitra momba ny fianarana desensitization na habaka (mahatonga ny fandeferana) amin'ny mpiserasera / firaisana ara-nofo: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fikarohana momba ny fikarohana tsy dia mahomby amin'ny fampiharana (hypofrontality) na ny fiasa mialoha ny fisorohana amin'ny mpisera vazimba / firaisana ara-nofo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Fanadihadiana manondro a dysfunctional stress system ao amin'ny mpiserasera / firaisana ara-nofo: 1, 2, 3.
Lisitry ny datin'ny famoahana: Ity lisitra manaraka ity dia ahitana ny fandinihan-drazana rehetra izay navoaka tao amin'ny mpiserasera amin'ny pôrnôgrafika sy ny mpandevina. Ny fianarana tsirairay voatanisa etsy ambany dia miaraka amin'ny famaritana na ny ampahany, ary manondro hoe iza amin'ireo fiovaovan'ny atidoha 4 izay mifandraika amin'ny fiankinan-doha vao haingana no manohana ny fandinihany:
1) Fanadihadiana mialoha momba ny toetra mampiavaka sy manimba ny fahasalamana (Miner et al., 2009)
[boriborintany alohan'ny alàlan'ny prefrontal / asa fanatanterahana mahantra kokoa) - fandalinana fMRI misy ifandraisany amin'ny fiankinan-doha amin'ny lahy sy ny vavy. Ny fandinihana dia mitatitra fihetsika manafintohina kokoa amin'ny lahasa Go-NoGo amin'ireo mpidoroka firaisana ara-nofo (mpivaro-tena) raha oharina amin'ny mpandray anjara mifehy. Ny fitiliana ny atidoha dia nanambara fa ny mpidoroka firaisana ara-nofo dia nanangana volo fotsy mialoha ny lohataona raha oharina amin'ny fanaraha-maso. sombiny:
Ankoatra ireo fepetra momba ny tena samirery, ny CSB marary dia naneho fiheverana bebe kokoa ho an'ny asa fitandremana, ny fizotran'ny Go-No Go.
Ny vokatra ihany koa dia manondro fa ny marary CSB dia mampiseho ny faritra avo kokoa eo amin'ny tendrony avo lenta (MD) noho ny fanaraha-maso. Ny fanadihadiana mifandraika dia nanondro ny fiarahamonina misy eo anelanelan'ny fepetra fisintonana sy ny faritra tsy dia misy eo an-toerana (FA) sy MD, fa tsy misy fikambanana miaraka amin'ny fepetran'ny faritra ambony. Ny fanadihadiana toy izany dia nanondro ny fiaraha-miasa goavana teo amin'ny MD ambony sy ny firaisana ara-nofo.
2) Ny fahasamihafan'ny tenanao momba ny fepetran'ny asan'ny mpanatanteraka sy ny fitondrantenan'ny toetr'andro amin'ny marary sy ny lahy sy ny vavy eo an-toerana (Reid et al., 2010)
[asa fanatanterahana mahantra kokoa] - Andininy iray:
Ireo marary mitady fanampiana amin'ny fitondran-tena maha-lahy na maha-vavy dia matetika mampiseho fisehoan'ny tsy fahalavorariana, ny hamafin'ny kognita, ny tsy fahaiza-mitsara zavatra, ny tsy fahampian'ny fifehezana ny fihetseham-po, ary ny fientanam-po be loatra amin'ny lahy sy ny vavy. Ny sasany amin'ireo toetra ireo dia mahazatra ihany koa amin'ireo marary maneho ny aretin'ny neurolojia mifandraika amin'ny tsy fetezan'ny mpanatanteraka. Ireo fandinihana ireo dia nitarika ny famotopotorana ankehitriny ny fahasamihafana misy eo amin'ny vondron'ireo marary hypersexual (n = 87) sy ny santionany amin'ny vondrom-piarahamonina tsy hypersexual (n = 92) lehilahy mampiasa ny fitondran-tena Rating Inventory an'ny Executive Function-olon-dehibe Version Hypersexual fitondran-tena dia nifandray tsara miaraka amin'ny fanondroana tsy fahombiazan'ny mpanatanteraka sy ny zana-kazo marobe an'ny BRIEF-A. Ireo valim-pikarohana ireo dia manome porofo mialoha manohana ny fiheverana fa ny tsy fetezan'ny mpanatanteraka dia mety ho voarohirohy amin'ny fitondran-tena eo amin'ny lahy sy ny vavy.
3) Mijery sary vetaveta amin'ny aterineto: Anjara asan'ny valim-panontaniana momba ny firaisana ara-nofo sy ny soritr'aretina ara-psikolojika amin'ny fampiasana ireo tranonkala firaisana ara-nofo loatra (Brand et al., 2011)
[faniriana lalina / fahatsiarovan-tena ary asa mahomby kokoa] - Ekena:
Ny vokatra dia maneho fa ny olana ara-pitaovan'ny tenany amin'ny fiainana andavanandro mifandraika amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny aterineto dia nambara mialoha avy amin'ny fanamarihana ara-pananahana momba ny firaisana ara-nofo, ny fahasamihafana ara-psikolojika maneran-tany, ary ny isan'ny fampihetseham-pon'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo amin'ny fiainana andavanandro, raha ny fotoana laniana amin'ny tranonkala firaisana ara-nofo (minitra isanandro) dia tsy nanampy betsaka ny fanazavana momba ny disadisa amin'ny isa IATsex. Hitantsika ny fifandraisan'ny kognita sy ny mason'ny atidoha izay ahafahana miaro amin'ny cyberex excessive sy izay voalaza ho an'ny olona manana fiankinan-doha.
4) Ny fanodinana sarimihetsika sary vetaveta dia manelingelina ny fahombiazan'ny asa fahatsiarovana (Laier et al., 2013)
Ny olona sasany dia mitatitra ireo olana mandritra ny androm-pifandraisana an-tserasera, tahaka ny tsy fahitan-torimaso sy ny fanadinoana ireo fotoana voatondro, izay mifandraika amin'ny voka-dratsy eo amin'ny fiainana. Ny fomba iray mety hitarika ireo karazana olana ireo dia ny fanentanana ara-pananahana mandritra ny firaisana ara-nofo amin'ny aterineto dia mety hanelingelina ny fahaizan'ny fahatsiarovan-tena (WM), ka mahatonga ny fanaovana tsirambina ny fampahalalam-baovao mahakasika ny tontolo iainana ary noho izany antony tsy dia mazava loatra. Vokatry ny valiny dia nampiseho ny fahombiazan'ny WM tamin'ny endrika sary pôrnôgrafika ny asa 4-aoriana raha oharina amin'ny toe-javatra telo sisa tavela. Ny finday dia nodinihina mikasika ny fiankinan-doha amin'ny aterineto satria ny fanodikodinan'ny WM amin'ireo sioka mifandraika amin'ny fiankinan-doha dia fantatra amin'ny fikajiana vatana.
5) Ny fanitsiana sary mihetsika dia manakantsakana ny fanapahan-kevitra-mampihetsi-po (Laier et al., 2013)
Niharatsy kokoa ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanapahan-kevitra raha nisy sary vetaveta naterak'ireo sarintsarim-pahefana mahavariana raha oharina amin'ny fahatanterahana raha nampifandraisina tamin'ireo sarivongana mahasoa ireo sary ara-pananahana. Ny firaisana ara-nofo dia mampifanaraka ny fifandraisana eo amin'ny fepetra takian'ny asa sy ny fanapaha-kevitra momba ny fanapahan-kevitra. Ity fianarana ity dia nanitrikitrika fa ny faneriterena ara-pananahana dia nanelingelina ny fanapahan-kevitra, izay mety hanazava ny antony mahatonga ny olona sasany hiaina voka-dratsy eo amin'ny sehatry ny fampiasana cyber.
6) Ny fiankinan-doha amin'ny cyberex: Ny firaisana ara-nofo niainany fony izy mijery sary vetaveta fa tsy ny fifandraisana ara-nofo amin'ny fiainana dia mahatonga ny fahasamihafana (Laier et al., 2013)
Ny valiny dia mampiseho fa ny fampihetseham-pon'ny vehivavy sy ny fanirian-tserasera amin'ny fampiasana sary vetaveta an-tserasera dia nanambara ny firoboroboan'ny fiankinan-doha amin'ny cyberex teo amin'ny fianarana voalohany. Ankoatr'izay dia naseho fa ireo mpampiasa cyberexana dia mitatitra ny fanehoan-kevitra ara-pananahana lehibe kokoa sy ny fanirian-tsainy vokatry ny fampisehoana an-tserasera. Amin'ny fianarana roa, ny tarehimarika sy ny kalitao amin'ny fifandraisana ara-piraisana ara-nofo dia tsy mifandray amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber. Ny valiny dia manohana ny fisainan-kevitra mahafa-po, izay mandrisika ny fanamafisana, ny mianatra momba ny fianarana, ary ny fanirian-daza amin'ny sehatra manan-danja eo amin'ny fampandrosoana sy ny fitandroana ny fiankinan-doha amin'ny cyber. Ny fifandraisana ara-pahasalamana mahantra na tsy mahafa-po amin'ny fiainana dia tsy afaka manazava tanteraka ny fiankinan-doha amin'ny Internet.
7) Ny faniriana hanao firaisana ara-nofo, fa tsy ny fitsaratsaram-poana, dia mifandraika amin'ny valin-kiran'ny neurophysiologique izay nateraky ny firaisana ara-nofo (Steele et al., 2013)
[fampifangaroana cue-mahery vaika kokoa miaraka amin'ny faniriana ara-nofo tsy dia ara-nofo: fahamailoana sy habituation] - Io fandinihana EEG io dia naverina ao amin'ny media ho porofo manohitra ny fisian'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnô / firaisana. Tsy izany. Steele et al. Ny 2013 dia manohana ny fisian'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny fampiasana sary vetaveta amin'ny faniriana hanao firaisana ara-nofo. Fa nahoana? Ny fanadihadiana dia nitatitra ny lahatsoratry ny EEG (mifandraika amin'ny sary tsy mitongilana) rehefa nalain'ny ankizy sary vetaveta fohy ny sary. Ny fanadihadiana dia mampiseho hatrany fa misy P300 avo lenta raha toa ka mihetsiketsika ireo mpidoroka (toy ny sary) mifandraika amin'ny fiankinan-doha.
Mifanaraka amin'ny Ny atidohan 'ny Cambridge University dia mandinika ny fianarana, ity fandalinana EEG ity dia nitatitra ihany koa ny fahatsapana fihetsika lehibe kokoa amin'ny pôrnôgrafia mifandraika amin'ny tsy faniriana hanao firaisana ara-nofo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa - ny olona manana fampidirana ati-doha bebe kokoa amin'ny pôrnôn dia aleony miady amin'ny pôrnônia toy izay manao firaisana amin'ny tena olona. Mahagaga, mpitondra tenin'ny fianarana Nicole Prause dia nilaza fa ny mpisera anaty aterineto dia "libido avo lenta", nefa ny vokatry ny fanadihadiana dia nilaza ny mifanohitra amin'izany (Ny fanirian'ny ankizy amin'ny firaisana ara-pananahana dia nilatsaka tamin'ny fampiasana sary vetaveta).
Miaraka amin'ireto Steele et al ireto. ny valim-panadihadiana dia manondro ny asan'ny ati-doha lehibe kokoa amin'ny fampisehoana (sary vetaveta), saingy tsy dia mihetsika ny valisoa voajanahary (firaisana amin'ny olona). Samy mampiavaka ny fiankinan-doha ireo. Taratasy enina nojeren'ny namana manazava ny marina: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jereo koa ity pitsarana YBOP.
Ankoatra ireo fanambarana maro tsy voatanisa ao amin'ny gazety, manelingelina ny fandalinana ny valin'ny fanadihadiana 2013 EGG an'ny Prause, noho izy ireo nijaly noho ny tsy fahaizan'ny metodista: 1) heterogeneous (lahy, vavy, tsy-heterosexuals); 2) tsy natao hijerena ny aretina ara-tsaina na ny fiankinan-doha; 3) Tsy misy vondrona contrôle ho fampitahana; 4) Tsy voamarina amin'ny fampiasana sary vetaveta na fiankinan-doha amin'ny filma.
8) Ny firafitry ny atidoha sy ny fifandraisana mifandraika amin'ny fijerena sary vetaveta: Ny atidoha amin'ny pôrnô (Kuhn & Gallinat, 2014)
[desensitization, habituation, ary tsiranoka mialoha tsy mandeha amin'ny laoniny]. Ity fandalinana Max Planck Institute fMRI ity dia nitatitra ny valin'ny neurolojia 3 mifandraika amin'ny avo kokoa amin'ny fampiasana sary vetaveta: (1) rafitra valisoa kely kokoa (dorsal striatum), (2) fampakarana faribolana kely noho ny fijerena sary vetaveta, (3) fifandraisana mahantra kokoa eo anelanelan'ny striatum dorsal sy ny cortex prefrontal dorsolateral. Ny mpikaroka dia nandika ny valiny 3 ho toy ny famantarana ny vokatry ny fijerena sary vetaveta maharitra. Hoy ny fanadihadiana,
Mifanaraka amin'ny fijerin'iretsy izany fa ny fakana an-keriny amin'ny fijerena sary vetaveta dia miteraka fihenam-bidy ny valinteny voajanahary amin'ny firaisana ara-nofo.
Ao amin'ny famaritana ny fifandraisana mahomby kokoa eo amin'ny PFC sy ny striatum dia hoy ilay fianarana,
Ny tsy fahombiazan'ity rafitra ity dia mifandraika amin'ny safidy tsy mifanaraka amin'ny fitondran-tena, toy ny fikarohana zava-mahadomelina, na inona na inona mety hitranga mety hitranga
Mpanoratra mpitarika Nilaza i Simone Kühn fanehoan-kevitra tao amin'ny famoaham-baovao Max Planck:
Mieritreritra isika fa ny olona manana filàna avo malemy dia mila fientanam-po mba hahazoany valisoa mitovy. Mety hidika izany fa ny fihenan'ny sary vetaveta tsy dia mahazatra loatra ny fandoavam-bola. Izany dia mety hitovy tanteraka amin'ny fisainan-kevitra hoe mila manentana ny firoboroboana ny rafitra famenony.
9) Ny fahasamihafana ara-tsimok'aretin'ny valanaretina ara-pahasalamana ara-nofo amin'ny olona miaraka amin'ny fitondrantena mampihetsi-po (Voon et al., 2014)
[fanentanana / fihenan-danja ary famoizam-po] Ny voalohany tamin'ny andiana fanadihadiana tao amin'ny anjerimanontolon'i Cambridge dia nahita ny fomba fiasan'ny ati-doha amin'ny mpidoroka pôrnôgrafia (lohahevitra CSB) izay hita amin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina sy mpisotro toaka - fanehoan-kevitra lehibe na fanentanana. Mpikaroka mpitarika Valerie Voon nanao hoe:
Misy fahasamihafana mazava eo amin'ny fampiasana ny atidoha eo amin'ny marary izay manana firaisana ara-nofo mandefitra sy mpirotsaka an-tsitrapo. Ireo fahasamihafana ireo dia mirakitra ireo mpidoroka zava-mahadomelina.
Voon et al., 2014 koa dia nahita fa ireo mpangalatra pôrnika dia mifanentana ny modely fanekena fiankinana ny maniry "azy" bebe kokoa, fa tsy tia "azy" intsony. Excerpt:
Raha oharina amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ara-pahasalamana, ny ankizy CSB dia manana faniriana ara-nofo bebe kokoa, na te hampiasa fehezanteny mazava tsara ary nahitàna lahatsary lehibe ho an'ny siantifika erotic, ka manaporofo ny fisaraham-bazana eo amin'ny faniriana sy ny fitiavana
Ny mpikaroka dia nitatitra ihany koa fa ny 60% an'ny lohahevitra (taona antitra: 25) dia sarotra tamin'ny fanatontosana ny fananganana / fananganana mpiara-miombon'antoka marina, kanefa mety hahatratra ny fanoratana amin'ny pôrnônika. Mampiseho ny fahatsapana na ny fahazarana izany. sombiny:
Ny lohahevitra CSB dia nitatitra fa vokatry ny fampiasana tafahoatra ny fitaovana mamoa fady… .. niaina libido na fihenan'ny erectile manokana amin'ny fifandraisana ara-batana amin'ny vehivavy (na dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana mamoa fady aza)…
Ny lohahevitra momba ny CSB raha oharina amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo salama dia tena sarotra be tamin'ny resaka firaisana ara-nofo ary nahitana olana goavam-be tany amin'ny firaisana ara-nofo, saingy tsy natao ho an'ny firaisana ara-nofo.
10) Fihetseham-po amin'ny fitandremana ho amin'ny firaisana ara-nofo mampihetsi-po amin'ny olona miaraka amin'ny fihetsika tsy misy herisetra ara-nofo (Mechelmans et al., 2014)
[fanentanana / fampidirana an-tsokosoko] - Ny fianarana faharoa amin'ny anjerimanontolo Cambridge. Sombiny:
Ny valim-pikarohanay momba ny fitongilanana miharihary… dia manome soso-kevitra mety hihoatra ny fitongilanana amin'ny fitongilanana hita miharihary amin'ny fandalinana ireo mari-pahaizana momba ny zava-mahadomelina amin'ny fikorontanan'ny fiankinan-doha. Ireo valim-pikarohana ireo dia nifamotoana tamin'ny fikarohana vao haingana momba ny fihenan-tsain'ny neural amin'ny resaka firaisana mamoa fady ao amin'ny [mpidoroka pôrnôgrafia] ao anaty tambajotra iray mitovy amin'ilay voarohirohy tamin'ny fanadihadiana momba ny reactivité-n'ny zava-mahadomelina ary manome fanohanana ireo teoria famporisihana famporisihana ny fiankinan-doha miorina amin'ny valin-kafatra momba ny firaisana ara-nofo amin'ny [ mpidoroka pôrnôgrafia]. Ity fitrandrahana ity dia nahitana ny voromailala tamin'ny fandinihantsika vao haingana fa ny horonan-tsary mamoa fady dia mifamatotra amin'ny hetsika lehibe kokoa amin'ny tambajotra neural mitovy amin'ilay voamarina tamin'ny fandalinana zava-mahadomelina. Ny faniriana bebe kokoa na ny faniriana fa tsy ny fitadiavana dia mifandray bebe kokoa amin'ny hetsika ao amin'ity tambajotra tsy miankina ity. Ireo fandinihana ireo dia manome fanampiana ho an'ny teoria famporisihana fanentanana ny fiankinan-doha misy ny valin-kafatra manoloana ny resaka firaisana amin'ny CSB.
11) Ny fiankinan-doha amin'ny cybersex amin'ny mpiserasera an-jatony amin'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto dia azo hazavaina amin'ny alàlan'ny fankasitrahana (Laier et al., 2014)
[faniriana / fanentanana lehibe kokoa] - Andininy iray:
Nandinika IPU vehivavy 51 sy mpisera sary vetaveta tsy Internet (51 NIPU) vehivavy izahay. Tamin'ny fampiasana fanontaniana dia nanombatombana ny hamafin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber amin'ny ankapobeny, ary koa ny fironana amin'ny fientanam-po, ny fitondran-tena amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny ankapobeny, ary ny hamafin'ny soritr'aretina ara-tsaina. Ankoatr'izay, paradigma fanandramana, anisan'izany ny isa fanentanana ny sary vetaveta 100, ary koa ny mari-pamantarana faniriana. Ny valiny dia nanondro fa ny IPU dia nanamarika ireo sary vetaveta ho mahaliana kokoa ary nitatitra ny filana bebe kokoa noho ny fampisehoana sary vetaveta raha oharina amin'ny NIPU.
Ankoatr'izay, ny faniriana, ny fanentanana ara-nofo amin'ny sarin'ny sary, ny fahatsapana ny fientanam-po, ny fitondran-tena mamoa fady, ary ny hamafin'ny soritr'aretina ara-psikolojika dia nanambara ny fironana amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet amin'ny IPU. Ny fifandraisana, ny isan'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy, ny fahafaham-po amin'ny fifandraisana ara-nofo, ary ny fampiasana Internet dia mifandray amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ireo valiny ireo dia mifanaraka amin'ireo notaterina ho an'ny lehilahy heterosexual tamin'ny fanadihadiana teo aloha. Ny firesahana momba ny toetra manamafy ny filan'ny nofo, ny fomba fianarana, ary ny anjara asan'ny cactivity ary ny faniriana amin'ny fampandrosoana ny fiankinan-doha amin'ny Internet amin'ny IPU dia mila resahina.
12) Ny porofo ara-tsindrimandry sy ny fiheverana ny teorika momba ny tranga izay mampiavaka ny fiankinan-doha amin'ny cybercenter amin'ny fomba fijery miafina (Laier et al., 2014)
Ny endriky ny tranga iray antsoina matetika hoe cyberex addiction (CA) sy ny rafitra fampandrosoana no resahina. Ny asa aloha dia maneho fa ny olona sasany dia mety ho mora voan'ny CA, raha ny fanamafisana ny porofo sy ny fiheveran'ny siansa dia heverina ho fototry ny fampandrosoana ny CA. Anatin'ity fandalinana ity, ny lehilahy heterosexual 155 dia nanome ny sary vetaveta 100 ary nanondro ny fampitomboana ny firaisana ara-nofo. Ankoatr'izany, ny fanandramana momba ny CA, ny fahatsapana ny fanentanana ara-pananahana, ary ny fampiasana tsy ara-dalàna ny firaisana ara-nofo amin'ny ankapobeny dia noraisina. Ny vokatry ny fanadihadiana dia mampiseho fa misy ny antony mahatonga ny fahabangan'ny CA ary manome porofo ny anjara asan'ny fahafaham-piraisana ara-nofo sy ny tsy fahaizana miasa amin'ny fampandrosoana ny CA.
13) Novelty, fitarihana sy fitarihana fitandremana amin'ny valisoa ara-nofo (Banca et al., 2015)
[Faniriana / fanentanana bebe kokoa sy fahazarana / fanalefahana] - Fianarana iray hafa an'ny University Cambridge fMRI. Raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso ireo mpidoroka pôrnôgrafia dia aleony mamorona sary vetaveta sy fika hafa mifandraika amin'izany. Na izany aza, ny ati-dohan'ireo mpidoroka pôrnôgrafia dia nizotra haingana tamin'ny sary vetaveta. Satria ny prezidansa vaovao dia tsy nisy teo aloha, inoana fa ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia dia mitarika fikatsahana zava-baovao amin'ny fiezahana handresy ny fahazarana sy ny tsy fahamendrehana.
Ny fitondran-tena mahamenatra (CSB) dia mifandraika amin'ny firoboroboan'ny firaisana ara-nofo, raha oharina amin'ny sary mifehy, ary ny safidin'ny besinimaro momba ny firaisana sy ny vola ary ny vokatra tsy miandany raha oharina amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo salama. Ny olona CSB koa dia nanana habaka cingulate dorsal lehibe kokoa hamerimberina sary vetaveta mifanohitra amin'ny vola miaraka amin'ny ambaratonga fahazarana mifamatotra amin'ny fanatsarana ny filan'ny nofo. Ny fihetsika manakaiky ny resaka firaisana ara-nofo tsy azo sarahina amin'ny safidim-baovao dia mifandraika amin'ny fitongilanana mialoha ny sary vetaveta. Ity fandinihana ity dia mampiseho fa ny olona CSB dia manana safidy bebe kokoa nohavaozina noho ny zava-baovao momba ny firaisana ara-nofo izay mety ho fanelanelanana amin'ny fahazarana cingulate lehibe kokoa miaraka amin'ny fanatsarana ankapobeny ny fanomezana valisoa.
An excerpt avy amin'ny famoaham-baovao:
Hitan'izy ireo fa rehefa nijery io sary mamoafady io hatrany ireo mpidoroka, raha oharina amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo salama dia niaina fihenan'ny asa bebe kokoa izy ireo tao amin'ny faritry ny ati-doha fantatra amin'ny hoe dorsal cingulate cortulaire dorsal, fantatra fa tafiditra amin'ny fiandrasana valisoa sy valiny. hetsika vaovao. Izy io dia mifanaraka amin'ny 'fahazarana', izay ahitan'ilay mpidoroka fanentanana mitovy kely sy kely valisoa - ohatra, ny mpisotro kafe dia mety hahazo 'buzz' kafeinina amin'ny kapoaka voalohany, fa rehefa mandeha ny fotoana dia misotro kafe izy ireo, ny kely kokoa no buzz lasa.
Izany fiantraikan'ny habibiana izany dia miseho amin'ny lehilahy salama izay miverimberina maneho ilay horonan-tsary manala baraka ihany. Saingy rehefa mijery lahatsary vaovao izy ireo, dia miverina amin'ny haavony indray ny haavon'ny fahalianana sy ny fitsangatsanganana. Midika izany fa, mba hisorohana ny fahazarana, ny fiankinan-doha hanao firaisana dia mila mikaroka famoahana sary vaovao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny habokana dia afaka mitondra ny fikarohana sary.
"Ny zava-bitantsika dia tena manan-danja tokoa amin'ny resaka pôrnôgrafia amin'ny aterineto," hoy i Dr Voon. "Tsy mazava hoe inona no mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny toerana voalohany ary azo inoana fa ny olona sasany dia mialokaloka kokoa amin'ny fiankinan-doha noho ny hafa, fa ny fanampiana tsy misy farany ny sary nalaina sary an-tserasera mivelona an-tsokosoko dia manampy ny fialan-tsasatra. sarotra kokoa ny mandositra. "
14) Ny faniriana neurale amin'ny faniriana ara-nofo amin'ny olona manana olana ara-pahasalamana mahomby (Seok & Sohn, 2015)
[fihenan-tsasatra / fanentanana bebe kokoa sy fizaran-tany mialoha tsy mandeha] Tahaka ny fanadihadiana nataon'ny Cambridge University dia nahita lamin'ny fampidirana ati-doha an-tsokosoko izy ireo amin'ireo mpidoroka amin'ny firaisana ara-nofo, izay manome taratry ny maodelin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina. Mifanaraka amin'ny fandalinana alemanina marobe dia nahita fanovana teo amin'ny korteks prefrontal izay mifanaraka amin'ny fiovana hita amin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina. Ny vaovao dia ny fitoviana nifanaraka tamin'ny lamina fampidirana kort prefrontal voamarina amin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina: Ny fihoaram-pefy bebe kokoa amin'ny sary mamoafady nefa nanakana ny valin'ireo fanentanana hafa hita miharihary. Sombiny:
Ny fandinihanay dia mikendry ny hanadihady ny fifandraisan'ny filan'ny nofo amin'ny filan'ny nofo misy sary (fMRI). Olona telo amby roapolo miaraka amin'ny PHB sy 22 fifehezana salama mifanentana amin'ny taonany no nojerena raha nijery tamim-pahatsorana ireo fanentanana ara-nofo sy tsy ara-nofo izy ireo. Ny haavon'ny filan'ny nofo amin'ny lahy sy ny vavy dia voasedra ho setrin'ny fanentanana ara-nofo tsirairay. Mifandraika amin'ny fanaraha-maso, ny olona manana PHB dia niaina faniriana hanao firaisana matetika sy mihombo kokoa mandritra ny fihenan-tsakafo. Ny fampahavitrihana lehibe kokoa dia voamarina ao amin'ny atin'ny caudate, ny lobe parietal ambany, ny gyrus cingulate anterior dorsal, ny thalamus, ary ny dorsolateral prefrontal cortex ao amin'ny vondrona PHB noho ny an'ny vondrona mifehy. Ankoatr'izay, ny lamina hemodynamika ao amin'ny faritra navitrika dia samy hafa amin'ny vondrona. Mifanaraka amin'ny valin'ny fandinihana sary an-tsaina ny atidoha momba ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina sy fitondran-tena, ny olona manana toetra mampiavaka ny PHB sy ny faniriana mihamitombo dia nampiseho fihenam-bidy niova tamin'ny korteks prefrontal sy ny faritra ambanin'ny tany.
15) Modification of potential potentials in favor of sexually explicit images of users and controversy incompatible with "Porn addiction" (Prause et al., 2015)
[habituation] - Fianarana faharoa EEG avy amin'ny Ny ekipan'i Nicole Praise. Ity fikarohana ity dia nampitaha ny lohahevitra 2013 avy amin'ny Steele et al., 2013 ho an'ny vondrona mpiaro tena izy (saingy nijaly noho ny tsy fahampian'ny metaly voalaza etsy ambony). Ny valiny: Raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso ny "olona mahatsapa olana amin'ny fijerena ny pôrnôgrafia", dia kely kokoa ny valin'ny ati-doha amin'ny sary mihetsiketsika vaksiny. The mpamorona milaza ireo vokatra ireo fa “fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia”. Inona no lazain'ny mpahay siansa ara-dalàna fa nopotehina ny fandalinana an-dry zareo irery sehatra fianarana tsara?
Raha ny tena izy, ny zava-misy Prause et al. 2015 mifanaraka tsara Kühn & Gallinat (2014), izay nahitana fa ny fampiasana sary vetaveta kokoa dia mifandray amin'ny fampidiran-dresaka tsy dia tsara loatra ho setrin'ny sarim-panafody vanille. Prause et al. Mitovy ihany koa ny fikarohana Banca et al. 2015 izay #13 ato amin'ity lisitra ity. Ankoatra izany, fanadihadiana EEG hafa nahita fa ny fampiasana pôrnôgrafia lehibe kokoa amin'ny vehivavy dia mifandraika amin'ny tsy fampidirana ati-doha amin'ny pôrnôgrafia. Ny vakiteny EEG ambany dia midika fa tsy dia mifantoka amin'ny sary ireo lohahevitra. Raha tsorina, ireo mpampiasa pôrnôgrafia matetika dia nohamaivanina tamin'ny sarinà pôrnika vanilla. Nankaleo izy ireo (nahazatra na tsy nanam-potoana). Jereo ity pitsarana YBOP. Bilaogy valo fito no manaiky fa io fandalinana io dia nahitana ny tsy firaharahiana / fahazarana amin'ny mpisera matetika mpampiasa (mifanaraka amin'ny fiankinan-doha): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
16) Hery tsy ara-dalàna HPA amin'ny lehilahy amin'ny aretim-pivalanana (Chatzittofis, 2015)
[valiny amin'ny adin-tsaina tsy mandeha miasa] - Fianarana miaraka amin'ireo mpidoroka lahy sy vavy 67 ary fanaraha-maso mifanaraka amin'ny taonany 39. Ny axis Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) no mpilalao afovoany amin'ny valin'ny adin-tsaintsika. fahazaran-dratsy manova ny fiarovan-tenan'ny atidoha mitarika mankany amin'ny HPA tsy mety. Ity fianarana momba ny fiankinan-dohan'ny fanaovana firaisana ara-nofo (hypersexuals) io dia nahitana valim-pifamoivoizana niova izay manintona ny zava-misy amin'ny fiankinan-doha. Fitaovana nivoaka tamin'ny famoahana gazety:
Ny fianarana dia nahitana ny lehilahy 67 amin'ny aretim-pivalanana mahery vaika sy ny CSNUMX mifehy izay mifehy tsara. Ireo mpandray anjara dia voamarina tsara amin'ny aretim-pivalanana tampoka sy ny fiaraha-miory amin'ny fahaketrahana na ny fahaketrahana amin'ny fahazazana. Ireo mpikaroka dia nanome azy ireo dip dexamethasone ambany amin'ny takariva talohan'ny fitsapana mba hanemorana ny valin'ny fitsaboana ara-batana, ary ny maraina dia nandanja ny haavon'ny hormonina kortisol sy ACTH. Hitan'izy ireo fa ny marary manana aretina mitera-pahavoazana dia manana hormonina hormonina toy izany raha oharina amin'ny fanaraha-maso mahasalama, ny fahasamihafana izay nijanona na dia aorian'ny fanaraha-maso ny fahaketrahana sy ny fahaketrahana amin'ny fahazazana aza.
"Ny lalàna mifehy ny fihenjanana amin'ny alikaola dia efa hita teo amin'ireo marary ketraka sy mamono tena ary koa amin'ireo mpampiasa zava-mahadomelina", hoy ny Profesora Jokinen. "Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fifantohana dia ny hoe ny trauma amin'ny fahazazana dia mety hiteraka tsy fetezan'ny rafi-pitabatabana amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny antsoina hoe epigenetika, amin'ny teny hafa izay mety hisy fiantraikany eo amin'ny fototarazo mifehy ireo rafitra ireo ny tontolo psychosocial." Araka ny voalazan'ny mpikaroka, ny valiny dia manondro fa ny rafi-pitondran-tena momba ny neurobiolojika voarohirohy amin'ny karazana fanararaotana hafa dia azo ampiharina amin'ireo olona manana aretina hypersexual.
17) Fifehezana ny fanavakavahana sy ny fiankinan-doha amin'ny aterineto: fakan-kevitra teolojika sy famerenana ny fikarohana momba ny neuropsychological and neuroimaging (Brand et al., 2015)
[faritra prefrontal tsy mandeha amin'ny asany / asa fanatanterahana mahantra kokoa sy fanentanana] - Andininy:
Mifanaraka amin'izany, ny valin'ny fikarohana neuroimaging sy ny fikarohana neuropsychological hafa dia mampiseho fa ny reacteur cue, ny faniriana ary ny fandraisana fanapahan-kevitra dia foto-kevitra lehibe amin'ny fahatakarana ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ny valiny momba ny fihenan'ny fanaraha-maso mpanatanteraka dia mifanaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena hafa, toy ny filokana. Izy ireo koa dia manasongadina ny fanasokajiana ny fisehoan-javatra ho fiankinan-doha, satria misy ihany koa ny fitoviana maro amin'ny fikarohana amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ankoatr'izay, ny valin'ny fandalinana ankehitriny dia azo ampitahaina amin'ny valin'ny fikarohana fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina ary manasongadina ny fampitoviana eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber sy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina na ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena hafa.
18) Ireo fikambanana tsy dia mifandray amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyberex: Adaption ny fisedrana iraisam-pirenena tsy misy dikany amin'ny sary mamoafady (Snagkowski et al., 2015)
[faniriana / fanentanana lehibe kokoa] - Andininy:
Ny fandalinana vao haingana dia mampiseho ny fitoviana misy eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber sy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina ary miady hevitra ny hanasokajiana ny fiankinan-doha amin'ny Internet ho fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ny fikambanana miharihary dia fantatra fa mitana andraikitra lehibe, ary ny fikambanana miharihary toy izany dia tsy nianarana momba ny fiankinan-doha amin'ny cyber, hatreto. Amin'ity fandalinana andrana ity dia mpandray anjara lehilahy heterosexual 128 no nahavita ny Test Implicit Association (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) novaina tamin'ny sary vetaveta. Ankoatr'izay, ny fitondran-tena mamoa fady, ny fahatsapana ny firaisana ara-nofo, ny fironana amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber, ary ny filan'ny nofo noho ny fijerena sary vetaveta.
Ny valiny dia mampiseho fifandraisana tsara eo amin'ny fiaraha-mientana amin'ny sary vetaveta miaraka amin'ny fihetseham-po tsara sy ny fironana amin'ny fiankinan-doka amin'ny cybersex, ny fitondran-tena mamaha olana, ny fientanentanana amin'ny fialan-tsasatra ara-nofo sy ny faniriana amin'ny lohahevitra. Ankoatr'izay, ny famakafakana indray ny famerenam-bolo dia nanambara fa ireo olona nitatitra faniriana ambony momba ny lohahevitra ary naneho firaisana amin'ny sary vetaveta miaraka amin'ny fihetseham-po tsara, indrindra fa ny fiankinan'ny cybersex. Ny valim-pikarohana dia maneho ny mety ho andraikitry ny fiaraha-mientana mahasoa miaraka amin'ny sary vetaveta amin'ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ny fiankinan-doka amin'ny cyber. Ankoatr'izay, ny valin'ny fandalinana amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny valim-pikarohana avy amin'ny fikarohana fiankinan-doha ary manantitrantitra ireo fitoviana eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny cybersex sy ny fiankinan-doha amin'ny zavatra hafa na fiankinan-doha hafa.
19) Ny soritr'aretin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber dia mety ho mifandray amin'ny manakaiky azy ary manalavitra ny filalaovana vetaveta: vokatry ny fandaharam-panazan'ny mpampiasa cyberex regular (Snagkowski, et al., 2015)
Ny fomba fanao sasany dia manondro ny fitoviana amin'ny fanjifana ara-tsiansa izay tena endriky ny fomba fiasa / fisorohana. Maro ny mpikaroka no nanamafy fa ao anatin'ny toe-javatra fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fiankinan-doha, ny tsirairay dia mety haneho ny fironana hanatona na hisoroka ny filana mifandraika amin'ny fiankinan-doha. Tamin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao dia nanao fanadihadiana momba ny fanodinkodinam-panadinana (AAT; Rinck sy Becker, 2007) miova amin'ny sary vetaveta. Nandritra ny mpandray anjara tamin'ny AAT dia tsy maintsy nanosika ireo sary vetaveta nalefany izy ireo na nanosika azy ireo ho amin'ny tenany tamin'ny jihosy. Ny fahatsapana manoloana ny fanentanana ara-pananahana, ny fitondran-tena mahomby eo amin'ny lahy sy ny vavy, ary ny fironana mankany amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber dia noraisina amin'ny valin'ny fanontaniana.
Ny valiny dia naneho fa ny olona manana fironana momba ny fiankinan-doha amin'ny cyber dia nanosika ny hanatona na hisoroka ny filalaovana vetaveta. Fanampin'izany, ny famerenam-bahaolana maoderina dia nanambara fa ny olona mihetsiketsika ara-pihetseham-pon'ny vehivavy sy ny fihetsika mamohehatra ara-pihetseham-po izay naneho ny fironana haingana / fisorohana, dia nitatitra ny fisehoan-toetran'ny fiankinan-doha amin'ny cyber. Raha oharina amin'ny fanampiana ara-tsakafo, ny vokatra dia manambara fa mety samy hanana anjara andraikitra amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyberexpression na ny tendron-draharaha sy ny fisorohana. Ankoatra izany, ny fiaraha-miasa amin'ny fahatsapana ho an'ny fanentanana ara-pananahana sy ny fihetsika ara-pananahana dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fahasarotan'ny fitarainana ara-tsaina amin'ny fiainana andavanandro noho ny fampiasana cyberex. Ny fikarohana dia manome porofo fanampiny momba ny fitoviana eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber sy ny fiankinan-doha. Ny fitoviana toy izany dia mety haverina any amin'ny fanodikodinam-borona azo tsapain-tànana amin'ny cybersex- sy ny sioka mifandray amin'ny zava-mahadomelina.
20) Mijanona amin'ny sary vetaveta? Ny fampiasana tafahoatra na ny tsy firaharahiana ny siansa cybersex amin'ny toe-javatra maro dia mifandraika amin'ny soritr'aretin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber (Schiebener et al., 2015)
[faniriana / fanentanana lehibe kokoa ary fanaraha-maso mahantra kokoa an'ny mpanatanteraka] - Andininy:
Ny olona sasany dia mandany ny votoatin'ny cybercine, toy ny lahatsoratra mamoafady, amin'ny fomba mampihetsi-po, izay miteraka vokatra ratsy eo amin'ny fiainana manokana na asa. Ny soso-kevitra iray izay miteraka vokatra ratsy dia mety hampihena ny fanaraha-maso mpanatanteraka amin'ny fahalalana sy fitondran-tena izay mety ilaina hahatsara ny fampifanarahana amin'ny fampiasana ny cyberex sy ny asa hafa sy ny adidy amin'ny fiainana. Ho fanamafisana ity lafiny ity, dia namotopototra ireo mpandray anjara lahy avy amin'ny 104 izahay niaraka tamin'ny paradigm multitasking mpanara-maso misy setriny roa: Ny singa iray dia ahitana sarin'olona, ​​ny sary hafa dia sary vetaveta. Amin'ny lafiny roa dia tsy maintsy sokajiana ireo sary araka ny fepetra sasany. Ny tanjona mazava dia ny hiasa amin'ny asa rehetra ho an'ny asa fanoratana amin'ny isa mitovy, amin'ny famindrana ny lahasa sy ny asa fanoratana amin'ny fomba mandanjalanja.
Hitantsika fa ny fahombiazan'ny fahasamihafana ao anatin'ity paradigma maro ity dia mifandraika amin'ny fironana mahery vaika manoloana ny fiankinan-doha amin'ny cyber. Ny olona amin'ity fironana ity matetika dia tsy mahomby na tsy miraharaha ny miasa amin'ny sary vetaveta. Ny vokatra dia maneho fa ny fifehezana ny fanamafisana ny fanatanterahana ny fanatontosana ny fahamaroan-tsakafo, rehefa atrehina amin'ny fitaovana mamoafady, dia mety hitondra amin'ny fitondran-tena mahatsiravina sy ny vokatra ratsy vokatry ny fiankinan-doha amin'ny cyberex. Na izany aza, ireo olona manana fironana momba ny fiankinan-doha amin'ny cyber dia toa manana fironana iray hisorohana na hanatona ny votoatin'ny sary vetaveta, araka ny resahina ao anatin'ireo modely fanindrahindrana.
21) Ny valisoa momba ny varotra ho an'ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao: Ny fampiasana sary vetaveta sy ny famerenana amin'ny laoniny (Negash et al., 2015)
[fanaraha-maso tsy mahomby amin'ny fanatanterahana: andrana noho ny antony] - Andininy:
Fianarana 1: Ireo mpandray anjara dia namita fanontaniana momba ny sary vetaveta ary asa fihenam-bidy amin'ny fotoana 1 ary avy eo efatra herinandro taty aoriana. Ireo mpandray anjara nitatitra ny fampiasana sary vetaveta voalohany kokoa dia nampiseho fihenam-bidy fihenam-bidy avo lenta kokoa amin'ny Time 2, mifehy ny fihenam-bidy fanemorana aloha. Fianarana 2: Ireo mpandray anjara izay tsy nampiasa sary vetaveta dia nampiseho fihenam-bidy ambany noho ny mpandray anjara izay nifady hanina ankafiziny.
Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia valim-panafody ara-pananahana izay mahatonga ny fihenan'ny fihenam-bidy amin'ny fomba hafa noho ny valisoa ara-boajanahary hafa, na dia tsy manelingelina na mampiankin-doha aza ny fampiasana. Ny fikarohana dia mitondra anjara biriky lehibe, mampiseho fa ny vokatr'izany dia mihoatra noho ny fanangonam-bahaolana.
Ny filàn'ny pôrnôgrafia dia mety hanome fahafinaretana ara-pananahana avy hatrany fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny sehatra hafa eo amin'ny fiainan'ny olona, ​​indrindra ny fifandraisana.
Ny fikarohana dia manoro hevitra fa ny sary vetaveta amin'ny Internet dia valisoa ara-pananahana izay manampy amin'ny fanemorana ny fihenam-bidy hafa noho ny valisoa voajanahary hafa. Zava-dehibe ny maneho ny pôrnôgrafia ho toy ny fanentanana tsy manam-paharoa amin'ny valisoa, ny famindrana fanandramana ary ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha ary ny fampiharana izany araka izany eo amin'ny tsirairay sy ny fitsaboana mifandraika amin'izany.
22) Fihetseham-po ara-pananahana sy fanararaotam-pahefana mahomby no mamaritra ny fiankinan-doha amin'ny cyber amin'ny lahy samy lahy na vavy.Laier et al., 2015)
Ny fikarohana vao haingana dia naneho ny fifandraisana misy eo amin'ny CyberSex Addiction (CA) ary ny fambara amin'ny fialana amin'ny firaisana ara-nofo, ary ny fanandramana ny fitondran-tena dia nanelanelana ny fifandraisana eo amin'ny soritra ara-pananahana sy ny soritr'aretin'ny CA. Ny tanjon'ity fandinihana ity dia ny fitsapana io fanelanelanana amin'ny santionany lahy io. Ny fanontaniana napetraky ny fanontaniana dia manombatombana ny soritr'aretina CA, ny fahatsapan-tena amin'ny fialam-boly ara-nofo, ny sary vetaveta dia mampiasa ny antony manosika, fitondran-tena mamoa olana, soritr'aretina ara-tsaina ary fitondran-tena amin'ny tena fiainana sy amin'ny Internet. Ankoatr'izay, ny mpandray anjara dia nijery lahatsary vetaveta ary naneho ny firaisana ara-nofo taloha sy taorian'ny fampisehoana horonantsary.
Ny valiny dia mampiseho fifamatorana mafy eo amin'ny soritr'aretin'ny CA sy ny tondro amin'ny fanaintainana ara-pananahana sy ny fialana amin'ny firaisana ara-nofo, ny fiatrehana fitondran-tena sy ny soritr'aretina ara-tsaina. CA dia tsy nifandray tamin'ny fitondran-tena ivelan'ny firaisana ara-nofo sy ny fotoana fampiasa amin'ny tontolon'ny Internet. Niatrika ny fitondran-tena amin'ny ampahany dia nanelanelana ny fifandraisan'ny fanambadian'ny firaisana ara-nofo sy ny CA. Ny valiny dia ampitahaina amin'ireo voalaza ho an'ireo lehilahy sy vehivavy heterosexual tamin'ny fanadihadiana teo aloha ary resahina hanoherana ny foto-kevitry ny fiheverana ny teorika CA, izay manasongadina ny anjara toeran'ny fanamafisana sy fiantraikany ratsy noho ny fampiasana cyber.
23) Ny Anjara asan'ny Neuro-inflammation ao amin'ny Pathophysiology ny Aretina amin'ny Hypersexual (Jokinen et al., 2016)
[valin'ny fihenan-tsasatra sy fivontosan'ny neuro] - Ity fanadihadiana ity dia nitatitra ambaratonga avo kokoa amin'ny fivontosana Tumor Necrosis Factor (TNF) amin'ireo mpidoroka firaisana ara-nofo raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso mahasalama. Ny haavon'ny TNF avo lenta (mariky ny fivontosana) dia hita ihany koa amin'ireo mpanararaotra zava-mahadomelina sy biby mpidoroka zava-mahadomelina (alikaola, heroinina, meth). Nisy fifamatorana matanjaka teo amin'ny ambaratonga TNF sy ny mizana mizana fandrefesana ny firaisana ara-nofo.
24) Fihetseham-po mahatsiravina: ny volavolan-dalàna sy ny fifanoherana eo an-toerana (Schmidt et al., 2016)
[boriborintany mialoha sy tsy fahatomombanana mialoha] - Ity dia fanadihadiana fMRI. Raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso mahasalama ny lohahevitra CSB (mpidoroka pôrnôgrafia) dia nampitombo ny volan'ny amygdala havia ary nampihena ny fifandraisana eo anelanelan'ny amygdala sy ny dorsolateral cortex DLPFC. Ny fihenan'ny fifandraisana eo amin'ny amygdala sy ny cortex prefrontal dia mifanaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Heverina fa ny fifandraisana ratsy kokoa dia mampihena ny fifehezana ny prefrontal cortex amin'ny fihetsiky ny mpampiasa hiditra amin'ny fihetsika mampiankin-doha.
Ity fandinihana ity dia manolo-kevitra fa ny fanapoizinana zava-mahadomelina dia mety hitarika ho amin'ny volondavenona kely ary noho izany dia hampihena ny haben'ny amygdala amin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina. Ny amygdala dia mavitrika hatrany mandritra ny fijerena sary vetaveta, indrindra mandritra ny fiandohan'ny firaisana ara-nofo voalohany. Angamba ny zava-baovao tsy miova sy ny fikarohana ary ny fikatsahana dia miteraka fiatraikany miavaka amin'ny amygdala amin'ireo mpampiasa pôrnôgrafia manery. Raha tsy izany, ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia taona maro sy ny voka-dratsin'ny vokany ratsy dia mampahory - ary cNy fihenjanana ara-tsosialy manerantany dia mifandray amin'ny fitomboan'ny isan'ny amgdala. Halalino ny #16 etsy ambony nahita fa ny "mpidoroka firaisana" dia manana rafitra fihenjanana be loatra. Mety hiteraka adin-tsaina mihoam-pitenenana mifandraika amin'ny fiankinan-doha amin'ny filma / firaisana ara-nofo, miaraka amin'ny antony mahatonga ny firaisana ara-nofo tsy manam-paharoa, mitarika amin'ny habetsahan'ny amigdala? Ekipa iray:
Ny voka-pikarohanay amin'izao fotoana izao dia manasongadina ny habetsaky ny fisondrotana ao amin'ny faritra iray voarohirohy amin'ny fahaizany manentana sy ny fifandraisana ambany amin'ny fanjakana amin'ny tambajotra fanaraha-maso mialoha ambany. Ny fanelingelenana ireo tambajotra toy izany dia mety hanazava ny fomba fitondran-tena maharikoriko mankany amin'ny valisoa miharihary eo amin'ny tontolo iainana na ny fihenan-tsain'ireo fanentanana hita miharihary. Na dia mifanohitra amin'izay hita ao amin'ny SUD aza ny valim-pikarohana volumetrika, dia mety hitaratra ny tsy fitoviana amin'ny asan'ny vokatry ny neurotoxic amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina maharitra. Ny porofo misongadina dia manondro ny mety ho fihoaram-pefy miaraka amin'ny fizotran'ny fiankinan-doha, indrindra ny fanohanana ny teoria fanentanana.
Nasehonay fa ny hetsika ao amin'ity tambajotra misy ny fahatsapana ity dia nohatsaraina taorian'ny fampahafantarana ireo fambara miharihary na mibaribary momba ny firaisana [Brand et al., 2016; Seok sy Sohn, 2015; Voon et al., 2014] miaraka amin'ny fitandremana mafimafy kokoa [Mechelmans et al., 2014] ary maniry manokana ny resaka ara-nofo fa tsy faniriana ara-nofo amin'ny ankapobeny [Brand et al., 2016; Voon et al., 2014]. Ny fiheverana ny fiheverana ny firaisana ara-nofo dia mifandray bebe kokoa amin'ny safidy mifototra amin'ny firaisana ara-nofo izay manamafy ny fifandraisana eo amin'ny fitondram-piraisana ara-nofo sy ny fitandremana miahy [Banca et al., 2016].
Ireo valim-pikarohana fanatsarana ny asa mifandraika amin'ny resaka firaisana ara-nofo dia samy hafa amin'ny an'ny vokatra (na ny stimulus tsy misy fepetra) izay fanatsarana ny fahazarana, mety mifanaraka amin'ny foto-kevitra momba ny fandeferana, dia mampitombo ny safidin'ny firaisana ara-nofo vaovao [Banca et al., 2016]. Miaraka amin'ireo zava-baovao ireo dia manampy amin'ny fanadihadiana ny neurobiology fototra an'ny CSB izay mitarika amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny aretina sy ny famantarana ny mety ho marika ara-pahasalamana.
25) Ny fihetsiketseham-panoheram-barotra ventral rehefa jerena ny sary malaza amin'ny sary vetaveta dia mifangaro amin'ny soritr'aretin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet Pôrnôgrafia (Brand et al., 2016)
[reactivity / fanentanana bebe kokoa] - Fandinihana fMRI alemanina. Finding # 1: Ny hetsika ivon-toerana valisoa (ventral striatum) dia avo kokoa noho ny sary vetaveta tiana kokoa. Finding # 2: Ny fihenan'ny striatum Ventral dia mifandraika amin'ny isa amin'ny fiankinan-doha amin'ny firaisana amin'ny Internet. Ireo valim-pikarohana roa ireo dia manondro fahatsapana sy mifanaraka amin'ny modely fiankinan-doha. Nilaza ny mpanoratra fa ny “fototry ny filan'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mitovy amin'ny fiankinan-doha hafa.” Sombiny:
Ny karazana fiankinan-doha amin'ny aterineto dia ny fanjifàna sary vetaveta loatra, izay antsoina koa hoe cyberexpression na ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ny fanadihadiana momba ny fahasalamana dia nahitana asa an-tserasera mivantana tamin'ny fotoana fijerin'ny mpandray anjara fanandramana ara-pananahana ara-piraisana raha oharina amin'ny fitaovana ara-nofo / ara-nofo tsy mazava. Ankehitriny izahay dia nihevitra fa ny striatum ventral dia tokony hamaly ny sary vetaveta malaza raha oharina amin'ireo sary vetaveta tsy dia tian'ny olona loatra ary ny fiheveran'ny striatum vendey amin'io fifanoherana io dia tokony hifanaraka amin'ny soritr'aretina amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Nianatra ny mpandray anjara malefaka ny lehilahy 19 izahay miaraka amin'ny sary paradigma, anisan'izany ny fitaovana amam-pihetseham-po alefany sy tsy tiany.
Ireo sary avy amin'ny sokajin-tsarimihetsika tiany indrindra dia noheverina ho misongadina bebe kokoa, tsy dia mahafinaritra, ary manakaiky kokoa ny tsara indrindra. Ny valim-panadinana Vri stumatum dia matanjaka kokoa noho ny toe-javatra farafaharatsiny raha oharina amin'ireo sary tsy tiana. Ny fihetsiketseham-panoheram-pahavitrihana vondra tamin'ity fifanandrinana ity dia nifanaraka tamin'ny soritr'aretina momba ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ny henjam-pihetseham-pihetseham-po samihafa dia ilay hany tokana fanta-daza amin'ny fanadihadiana an-tsokosoko amin'ny valin'ny valim-panatanjahan-tena mibaribary noho ny fihenan-danja sy ny sebivola amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet, ny firaisana ara-nofo eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fitondrantenan'ny toetrandro, ny fahaketrahana, ny fahatsapan'ny hafa, ary ny fitondran-tena ara-nofo amin'ny andro farany toy ny mpandray anjara . Ny valiny dia manohana ny anjara asan'ny striatum ventral amin'ny famoahana ny antom-pisian'ny valisoa sy ny fahafaham-po mifandraika amin'ny fitaovana amam-pihetseham-po. Ireo fepetra ahafahana manonona valim-bavaka ao amin'ny striatum ventral dia mety hanome fanazavana momba ny antony mahatonga ny olona manana safidy sasantsasany sy sary vetaveta mety hampidi-doza ny tsy hifehezany ny fanjifana sary vetaveta amin'ny Internet.
26) Ny fihoaram-pefy sy ny fahasamihafana eo amin'ny natiora amin'ny vatana miaraka amin'ny fitondran-tena mahatsiravina (Klucken et al., 2016)
[fihenan-tsasatra / fahatsapana bebe kokoa ary fizarana prefrontal tsy mandeha amin'ny laoniny] - Ity fanadihadiana alemà fMRI ity dia namerina fikarohana lehibe roa avy amin'ny Voon et al., 2014 ary Kuhn & Gallinat 2014. Fikarohana lehibe: ny fifandraisan'ny neural amin'ny filan'ny sakafo sy ny fifandraisana amin'ny neural dia novaina tao amin'ny vondrona CSB. Raha ny filazan'ny mpikaroka, ny fanovana voalohany - fampitomboana ny amygdala activation - dia mety hanehoana ny fanamorana ny fifehezana (“tariby” lehibe kokoa amin'ireo famantarana tsy miandany maminany sary vetaveta).
Ny fanovana faharoa - ny fihenan'ny fifandraisana eo amin'ny striatum ventral sy ny cortex prefrontal - dia mety ho mariky ny fahalemena mifehy ny impulses. Hoy ny mpikaroka: "Ireo [fanovana] ireo dia mifanaraka amin'ny fanadihadiana hafa manadihady ny fifandraisan'ny aretin'antoka amin'ny fiankinan-doha amin'ny aretina sy ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso." Ny valin'ny fampahavitrihana amygdalar lehibe kokoa amin'ny famantarana (fanentanana) ary ny fihenan'ny fifandraisana eo amin'ny foiben'ny vala sy ny cortex (hypofrontality) dia roa amin'ireo fiovan'ny ati-doha lehibe hita amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ho fanampin'izany, ny 3 amin'ireo mpampiasa pôrnôgrafia manafintohina 20 dia niharan'ny “fikorontanan'ny orgasmika.” Sombiny:
Amin'ny ankapobeny dia mitombo ny asan'ny amgdala ary ny fihenam-bidy mihodina amin'ny vondron'olona mivantana miaraka amin'ny PFC dia manome tombony momba ny etiology sy ny fitsaboana ny CSB. Ny lohahevitra miaraka amin'ny CSB dia toa sahiran-tsaina kokoa amin'ny fananganana fikambanana misy eo amin'ny sehatra tsy miandany sy ny fanentanana ara-tontolo iainana mahakasika ny tontolo iainana. Noho izany, ireo lohahevitra ireo dia mety hihaona amin'ny sehatra izay mitarika ny fitondran-tena. Na mitarika amin'ny CSB izany na vokatry ny CSB dia tsy maintsy valiana amin'ny fikarohana amin'ny ho avy. Ankoatra izany, ny dingana fanaraha-mason'ny fanaraha-maso, izay hita taratra amin'ny fihenan'ny vondron'olona mivelatra eo an-davarangana, dia mety hanohana bebe kokoa ny fihazonana ny fihetsika henjana.
27) Fifandimbiasam-pahefana eo amin'ny fampiasana tsy ara-pahasalamana amin'ny karazana zava-mahadomelina sy ny valisoa tsy misy fitsaboana (Banca et al., 2016)
[fanamafisana / fanentanana bebe kokoa, valinteny nohamafisina kokoa] - Ity fandinihana Cambridge University fMRI ity dia mampitaha ny lafiny faneriterena amin'ny alikaola, mpihinana binge, mpidoroka lalao video ary mpidoroka pôrnôgrafia (CSB). sombiny:
Mifanohitra amin'ny korontana hafa, ny CSB raha oharina amin'ny HV dia nahazoana fidiram-bola haingana mba hamoahana ny vokatra miaraka amin'ny fikirizana bebe kokoa amin'ny toe-javatra azo antoka, na inona na inona vokatra. Ny lohahevitry ny CSB dia tsy nampiseho fahasamihafana voafaritra manokana amin'ny fianarana mamadika na manova fianarana. Ireo zava-misy ireo dia mifamahofaho amin'ny fijerintsika teo aloha ny fitiavam-bahaolana ho an'ny fanentanana mifandraika amin'ny vokatra ara-piraisana ara-nofo na ara-bola, amin'ny ankapobeny dia manolo-kevitra ny hampitombo ny fahatsapana ny valisoa (Banca et al., 2016). Fampianarana fanampiny mampiasa valisoa lehibe no aseho.
28) Ny fiankinan'ny fiantsoana ny pôrnôgrafia sy ny fianarana mavitrika dia manambara ny fironana hiditra amin'ny fiankinan-doha amin'ny cyber amin'ny ohatra avy amin'ny mpampiasa cyberex regular (Snagkowski et al., 2016)
[fanehoan-kevitra / fanentanana bebe kokoa, valinteny nohamafisina kokoa] - Ity fanadihadiana tsy manam-paharoa ity dia nampiorina ireo lohahevitra tamin'ny endrika tsy miandany, izay naminavina ny fisehoan'ny sary vetaveta. sombiny:
Tsy misy fifanarahana momba ny fepetra famahana ny cyberex addiction. Ny fomba fijery sasany dia mampitaha ny fitoviana amin'ny fiankinan-doha amam-batana, izay fianarana mahomby indrindra ho an'ny fianarana. Anatin'ity fandalinana ity dia nanao fananganana serivisy serivaney 86 ny serivisy XenumX ho an'ny tetikasa fanovozam-panavaozana amin'ny alàlan'ny sary vetaveta mba hanadihadiana ny fianarana ifaneraserana amin'ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Fanampin'izany, ny faniriana manenina noho ny fijerena sary vetaveta sy fironana momba ny fiankinan-doha amin'ny cyber dia nojerena. Ny vokatra dia maneho ny fiantraikan'ny faniriana ara-tsaina amin'ny fironana manoloana ny fiankinan-doha amin'ny cyber, fampiroboroboana ny fianarana ifaneraserana.
Amin'ny ankapobeny, ireo valim-pikarohana ireo dia manondro ny anjara toerana manan-danja amin'ny fianarana mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny fiankinan'ny cybersex, ary manome porofo hafa koa momba ny fitoviana eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny akora sy ny fiankinan-doka amin'ny cyber. Raha fintinina, ny valin'ny fandalinana amin'izao fotoana izao dia milaza fa ny fianarana mpiara-miasa dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiankinan-doha amin'ny cybersex. Ny zavatra hitanay dia manome porofo fanampiny momba ny fitoviana eo amin'ny fiankinan-doha amin'ny cybersex sy ny fiankinan-doha amin'ny akora hatramin'ny nanehoana ny fitaomana ny filan-kevitra amin'ny lohahevitra sy ny fianarana iraisana.
29) Ny fiovana mivaona taorian'ny fijerena sary vetaveta ao amin'ny Internet dia mifandraika amin'ny soritr'aretina momba ny korontana amin'ny Internet (Laier & Brand,2016)
[faniriana / fanentanana lehibe kokoa, tsy fitiavanao loatra] - Andininy:
Ny valim-pikarohana lehibe indrindra dia ny fironana mankamin'ny aretina vetaveta amin'ny Internet (IPD) dia mifandray ratsy amin'ny fahatsapana ho tsara, mifoha, milamina ary koa miatrika fihenjanana amin'ny fiainana andavanandro sy ny antony manosika hampiasa sary vetaveta amin'ny Internet amin'ny resaka fikatsahana fientanam-po. sy ny fisorohana ny fihetseham-po. Ankoatr'izay, ny fironana mankany amin'ny IPD dia misy ifandraisany amin'ny toetr'andro taloha sy aorian'ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet ary koa ny fitomboan'ny toe-tsaina tsara sy milamina.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny fironana mankany amin'ny IPD sy ny fikatsahana fientanam-po noho ny fampiasana Internet-pôrnôgrafia dia nohon'ny fanombanana ny fahafaham-pon'ny orgasme efa za-draharaha. Amin'ny ankapobeny, ny valin'ny fandalinana dia mifanaraka amin'ny petra-kevitra fa ny IPD dia mifamatotra amin'ny antony manosika hahita fahafinaretana ara-nofo sy hisorohana na hiatrehana fihetseham-po mahatsiravina ary koa ny fiheverana fa ny fiovan'ny toe-tsaina aorian'ny fanjifana sary vetaveta dia mifandray amin'ny IPD (Cooper et al., 1999 ary Laier sy Brand, 2014).
30) Fihetseham-po amin'ny resaka firaisana ara-nofo eo amin'ny tanora efa lehibe: Fikambanana amin'ny sehatry ny klinika, fitondran-tena, ary tsy voamarina (2016)
[fiasan'ny mpanatanteraka mahantra kokoa] - Ireo olona manana fitondran-tena manahirana ara-nofo (PSB) dia naneho tsy fahatomombanana neuro-kognitika maro. Ireo fikarohana ireo dia manondro fa mahantra kokoa mpitantana mpanatanteraka (hypofrontality) izay Ny tranon'ny atidoha lehibe indrindra amin'ny mpidoroka zava-mahadomelina. Ekipa vitsivitsy:
Ny vokatry ny fanadihadiana dia ny fampisehoana ny PSB mampiseho fiaraha-mientana manan-danja amin'ny toe-pahasalamana marary marobe, anisan'izany ny fihenanam-po, ny fihenan'ny hatsaram-piainana, ny toetran'ny BMI, ary ny tahan'ny fandraisana tsikombakomba kokoa noho ny aretina maro ...
... Azo atao ihany koa ny mampiavaka ny karazana klioba hita ao amin'ny tarika PSB fa vokatry ny fari-pahaizan'ny tertiary izay mahatonga ny PSB sy ireo karazana klioba hafa. Ny antony iray mety hameno an'io andraikitra io dia ny tsy fahampian-tsakafo tsy voatanisa ao amin'ny tarika PSB, indrindra ireo izay mifandray amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny mpiasa, ny fikolokoloana / fanaraha-maso ary ny fanapahan-kevitra. Avy amin'io endri-javatra io, azo atao ny mamantatra ireo olana hita ao amin'ny PSB sy ireo lafiny hafa momba ny toetrandro, toy ny dysregulation ara-pihetseham-po, ny tsy fahampian'ny tsimokaretina manokana ...
Raha toa ny kognitive olana voalaza ato anatin'io fanadihadiana io dia ny singa fototra amin'ny PSB, mety hisy fiantraikany eo amin'ny klioba izany.
31) Methylation of hax genes for HPA in men with disorder (Jokinen et al., 2017)
[valin'ny fihenjanana tsy miasa, fiovana epigenetika] - Ity dia fanarahana #16 etsy ambony izay nahatsikaritra fa ny mpidoroka amin'ny lahy sy ny vavy dia manana rafitra adin-tsaina tsy miasa - fiovana lehibe neuro-endocrine vokatry ny fiankinan-doha. Ny fandinihana ankehitriny dia nahita fiovan'ny epigenetika amin'ny fototarazo manoloana ny valin'ny fihenan'ny olombelona ary mifandray akaiky amin'ny fiankinan-doha. Miaraka amin'ny fanovana epigenetika, tsy niova ny filaharana ADN (tahaka ny mitranga). Etsy andaniny, ny gnika dia marihina ary mihintsana ny fiteniny (lahatsary fohy manazava ny epigenetika). Ny fiovan'ny epigenetika voalaza tao anatin'ity fandinihana ity dia nahatonga ny fanovàna ny tsimokaretina CRF. CRF dia neurotransmitter sy hormon izay mitondra fitondrantena mampiankin-doha toy ny faniriana, ary dia Mpilalao lehibe amin'ny ankamaroan'ny fanesorana ny soritr'aretina niainana fananana ary fitondran-tena, anisan'izany ny porn addiction.
32) Famakafakana ny fifandraisana eo amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fitandremana fitandremana amin'ny teny mamoafady amin'ny firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady (Albery et al., 2017)
[réactivity / fanentanana bebe kokoa, fanalefahana] - Ity fandinihana ity dia mamerina ny valin'ny ity fianarana 2014 Cambridge University ity, izay mampitaha ny fitongilanana hita maso amin'ireo mpidoroka sary vetaveta amin'ny fanaraha-maso mahasalama. Ity no zava-baovao: ny fandinihana dia nampifandraisina ireo “taona nanaovana firaisana ara-nofo” tamin'ny 1) naoty fiankinan-doha amin'ny firaisana ary koa 2) ny valin'ny asa fitongilanana hita. Anisan'ireo nahazo isa ambony tamin'ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo, taona vitsy niainany tamin'ny firaisana ara-nofo dia nifandray tamin'ny fitongilanana miharihary (fanazavana ny fitongilanana manintona).
Isa noho ny faneriterena ara-nofo ambony kokoa + taona vitsivitsy amin'ny fanandramana ara-nofo = mariky ny fiankinan-doha kokoa (fitongilanana miharihary, na fanelingelenana). Saingy ny fitongilanana mitandrina dia mihena tampoka amin'ireo mpampiasa manery, ary manjavona amin'ny taona ambony indrindra amin'ny traikefa ara-nofo. Nofintinin'ny mpanoratra fa ity valim-pifidianana ity dia mety hanondro fa ny "fanaovana firaisana ara-nofo an-tery" an-taonany maro dia miteraka fahazarana lehibe kokoa na fanalefahana ny valin'ny fahafinaretana (fanalefahana). Sombiny avy amin'ny fehiny:
Ny fanazavana iray mety ho an'ireo valiny ireo dia satria ny olona manaitaitra firaisana ara-nofo dia manao fihetsika mahery vaika kokoa, ny môdely arousal iray mifandraika amin'izany dia mamorona [36–38] ary rehefa mandeha ny fotoana dia ilaina ny fihetsika tafahoatra mba hahazoana fepetra mitovy amin'izany. Mbola voaresaka ihany koa ny hoe rehefa manao fihetsiketsehana mavesatra kokoa ny olona iray, dia lasa diso fanantenana ireo aretin-tsaina (ara-piraisana ara-nofo) na sary sy ireo sary ary olona nitodika tamin'ny fanentanana bebe kokoa 'hahatsapa ny faniriana. Mifanaraka amin'ny asa izay mampiseho fa ny lahy 'salama' dia mihamalalaka amin'ny fanavahana miharihary rehefa mandeha ny fotoana ary ny habakabaka io dia aseho amin'ny fihenan'ny valiny sy ny fientanentanana .
Izany dia manondro fa ny mpandray anjara mavitrika kokoa sy mavitrika dia lasa 'malahelo' na tsy miraharaha ireo teny mifandraika amin'ny 'firaisana ara-dalàna' ampiasaina amin'ny fandinihana ankehitriny sy ho toy ny fihenan'ny fampisehoana toy izany, mihena kosa ny fanehoan-kevitra, ary ireo izay manana fanerena be loatra ary tsy dia manana traikefa loatra dia mbola nanelanelana. satria ny fientanentanana dia taratry ny fahatsapana mora kokoa.
33) Mpifanaraka mivantana amin'ny lehilahy mandroaka lahy sy vavy tsy lahy sy vavy Mifehy sy mialoha ny fijerena horonantsary erotic (Messina et al., 2017)
[fiasan'ny mpanatanteraka mahantra kokoa, faniriana mafy / fanentanana bebe kokoa] - Fipoahana sary vetaveta mihatra amin'ny lehilahy manana "fitondran-tena maharikoriko", fa tsy fanaraha-maso mahasalama. Ny fiasan'ny mpanantanteraka Poorer rehefa iharan'ny tsikombakomba mifandraika amin'ny fiankinan-doha dia marika mampiavaka ny tsy fanjarian-tsakafo (manondro ny roa hiova, prefrontal faritra ary fanentanana). sombiny:
Io fitadiavana io dia maneho fitenenana tsara kokoa aorian'ny fiterahana ara-nofo amin'ny alalan'ny fanaraha-maso raha ampitahaina amin'ny mpandray anjara mampihetsi-po. Ireo tahirin-kevitra ireo dia manohana ny hevitra hoe tsy manararaotra ny mety ho vokatra azo avy amin'ny traikefa ny lehilahy manambady manambady, izay mety hanatsara ny fitondran-tena tsara. Ity koa dia azo heverina ho toy ny tsy fahampian'ny fiantraikany amin'ny fianarana amin'ny vondron'olona ifaneraseran'ny vehivavy rehefa mampirisika ny olona hanao firaisana ara-nofo izy ireo, mitovy amin'ny zava-mitranga eo amin'ny tsingerin'ny fiankinan-doha ara-pananahana, izay manomboka amin'ny fitomboan'ny fiterahana ara-pananahana, arahin'ny fampiatoana ny firaisana ara-nofo skripts ary avy eo orgasm, matetika mahakasika ny fijerena toe-javatra mampidi-doza.
34) Mety Hianjera ve ny Porn? Fianarana momba ny lehilahy miorina amin'ny fMRI mikatsaka ny fitsaboana amin'ny fampiasana sary vetaveta (Gola et al., 2017)
[fanamafisana / fanentanana bebe kokoa, valinteny nohamafisina kokoa] - Fandinihana fMRI misy paradigma miavaka amin'ny fanehoan-kevitra tsy manam-paharoa izay naminavina ny fisehoan'ny sary vetaveta. sombiny:
Ny lehilahy miaraka amin'ny tsy fampiasana sary vetaveta (PPU) dia samy hafa tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny atidoha ka nanambara ireo sary erotic, fa tsy tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny sary erotika, mifanaraka amin'ny fampianaran'ny fiankinan-doha. Ity fampidirana ny ati-doha ity dia niaraka tamin'ny fitomboan'ny antony manosika hijerena sary vetaveta ('faniriana ambony'). Ny fihenan-tsain'ny striatal Ventral ho an'ny famantarana milaza mialoha ny sary erotika dia mifandraika amin'ny hamafin'ny PPU, ny habetsaky ny fampiasana sary vetaveta isan-kerinandro ary ny fihoaran'ny herinandro. Ny valim-pikarohanay dia manondro fa toy ny amin'ny fampiasana zava-mahadomelina sy ny filokana dia ny mekanisma tsy mitongilana sy ny fitondran-tena mifandraika amin'ny fanodinana antontan'isa momba ny cues dia mifandraika indrindra amin'ny endri-javatra mifandraika amin'ny PPU. Ireo valim-pikarohana ireo dia manondro fa ny PPU dia mety haneho fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena ary ny fitsabahana manampy amin'ny fikendrena ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena sy ny zava-mahadomelina dia manome fiheverana ny fampifanarahana sy ny fampiasana amin'ny fanampiana lehilahy miaraka amin'ny PPU.
35) Mora sy mahatsiaro ny fihetseham-po vokatry ny fihetseham-po: Manao firaisana ve izy ireo amin'ny fampiasana sary vetaveta? (Kunaharan et al., 2017)
[habituation na desensitization] - Ny fanadihadiana dia nanombana ny valintenin'ireo mpampiasa pôrnôgrafia (Vakiteny EEG & valiny Startle) amin'ireo sary manentana ny fihetsem-po - ao anatin'izany ny erotika. Ny fandinihana dia nahita fahasamihafana eo amin'ny neurolojia eo amin'ny mpampiasa pôrnônika ambany sy ny mpampiasa pôrnônzy matetika. sombiny:
Ny fikarohana dia manoro hevitra fa ny fampiasana sary vetaveta dia toa misy fiantraikany eo amin'ny valin-kafatra tsy fantatry ny ati-doha amin'ny fihetseham-po mampihetsi-po izay tsy asehon'ny tatitra mivantana.
4.1. Famaritana mazava: Tsara ny manamarika fa ny vondrona malaza amin'ny fampiasana sary vetaveta dia nanamarika ny sary erotic dia mahasosotra kokoa noho ny vondrona fampiasa amin'ny fampiasana fampiasa. Ny solo-tena dia manondro fa mety ho noho ny "mason-kibon'ny" karazan'ireo sary "erotic" izay voarakitra ao amin'ny tahiry IAPS no tsy manome ny lanjan'ny fanentanana mety hikatsahana azy, araka ny nasehon'i Harper sy Hodgins  fa miaraka amin'ny fijerena matetika ny sary vetaveta, matetika ny olona maro no miakatra mijery zavatra mafimafy kokoa mba hitazomana ny haavon'ny ara-batana.
Ny sokajy fihetseham-po "mahafinaritra" dia nahita ny tarehim-pahamarinana nataon'ireo vondrona telo ireo fa mitovy amin'ny tarika ampiasana avo lenta kokoa ny sary fa somary tsy dia mahafinaritra noho ny an'ny tarika hafa. Mety ho noho ny sary “mahafinaritra” naseho fa tsy mahavariana ny olona ao amin'ilay vondrona ampiasain'ny avo. Ny fandalinana dia nampiseho fanafoanana ara-batana amin'ny fanodinana ny votoatin'ny sakafo matsiro noho ny fiantraikan'ny habituation amin'ny olona matetika mitady ny sary vetaveta [3, 7, 8]. Ny fifandiran'ny mpanoratra no ahafahana manatanteraka ny valiny.
4.3. Modely miandalana reflexa (SRM): Ny fiantraikan'ny fihenan'ny amnistie fihenam-bidy hita ao amin'ny vondrona fampiasana sary vetaveta ambany sy ambany dia mety hohazavain'ny olona ao amin'ny vondrona manala ny fampiasana sary pôrnôgrafia, satria mety ho tsy dia mahafinaritra loatra izany. Na koa, ny vokatra azo dia mety ho vokatry ny fitrandrahana habaka, izay ahafahan'ny olona ao amin'ireny vondrona ireny mijery sary vetaveta kokoa noho izay efa nambaran'izy ireo-angamba noho ny antony mahamenatra ny hafa, satria vokatry ny habetsahana dia nampitombo ny fiakaran'ny hafanam-po [41, 42].
36) Ny fitrandrahana ny firaisana ara-nofo dia manosika ny fampindramam-bola lehibe kokoa amin'ny fitomboan'ny fandraisana anjara amin'ny fisorohana amin'ny tsy fahampiana aterineto eo amin'ny lehilahy (Cheng & Chiou, 2017)
[fiasan'ny mpanatanteraka mahantra kokoa, fanentanana bebe kokoa - fanandramana fanentanana] - Tao anatin'ny fandalinana roa natao tamin'ny fanentanana ara-nofo dia nanjary: 1) fihenam-bidy mihemotra bebe kokoa (tsy faharetan'ny fanemorana ny fahafaham-po), 2) fironana lehibe hirotsaka amin'ny delinquency cyber, 3) fironana lehibe hividianana entana sandoka sy fanapahana kaonty Facebook an'ny olona iray. Raha raisina miaraka izany dia manondro fa ny fampiasana sary vetaveta dia mampitombo ny tsy fahalavorariana ary mety hampihena ny fiasan'ny mpanatanteraka sasany (fifehezan-tena, fitsarana, fahitana mialoha, fifehezana tsindroka). Excerpt:
Olona matetika no mahatsikaritra ny firaisana ara-nofo mandritra ny fampiasana Internet. Ny fikarohana dia naneho fa ny fanentanana manosika ny fanaovana firaisana ara-nofo dia mety hitarika ho amin'ny fihanaky ny fahatsapana lehibe kokoa amin'ny lehilahy, toy ny fisehoana amin'ny fihenam-bidy bebe kokoa (izany hoe, ny fironana hahazo tombony kely kokoa, avy hatrany ho an'ny lehibe kokoa, hoavy).
Ho famaranana, ny vokatra amin'izao fotoana izao dia mampiseho fifamatorana eo amin'ny firaisana ara-nofo (ohatra, ny fampisehoana sary ny vehivavy sexy na ny akanjo am-pitiavana) ary ny fidiran'ny lehilahy amin'ny fandikana cyber. Ny fikarohana ataontsika dia manoro hevitra fa ny fihenjanana sy ny fifehezan-kevitr'olombelona, ​​izay asehon'ny fanararaotana ara-nofo, dia mety ho tsy fahombiazana eo anatrehan'ny tarehin-jaza maro. Ny lehilahy dia afaka mandray soa avy amin'ny fanaraha-maso raha misy ifandraisany amin'ny fifidianana ara-piraisana ara-nofo ny fifidianana sy ny fitondran-tenany. Ny fikarohana ataontsika dia manoro hevitra fa ny fanentanana ara-piraisana ara-nofo dia mety haka fanahy ny olona amin'ny lalan'ny fahabangan'ny cyber
Ny valiny amin'izao fotoana izao dia manondro fa ny fahazoana betsaka ny fanentanana ara-nofo amin'ny habaka an-habakabaka dia mety hifandray akaiky kokoa amin'ny fitondran-tena amin'ny cyber-delinquent an'ny lehilahy noho ny noheverina teo aloha.
37) Ireo mpialoha lalana (Fampihorohoroana) Fampiasana fitaovam-pihetseham-batana amin'ny aterineto Mamisoa: Ny anjara asan'ny fananahana Ny firoboroboana ara-piraisana ara-nofo sy ny fironana eo amin'ny fiarahamonina manoloana ny firaisana ara-nofoStark et al., 2017)
[fihenan-tsakafo / fanentanana / faniriana bebe kokoa] - Andininy:
Ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao dia nanadihady fa ny antony manosika ny firaisana ara-nofo sy ny fomba fiasa manoloana ny firaisana ara-nofo dia maminavina ny fampiasana ny SEM sy ny fotoana andehananao mijery ny SEM. Tamin'ny alalan'ny fanandramana fitondran-tena, nampiasainay ny Tetikasa Approach-Avoidance (AAT) mba handrefesana ny fironana eo amin'ny fomba fiasa ara-pananahana. Ny fifamatorana miavaka amin'ny fironana manoloana ny SEM sy ny fotoana andavanandro najoro tamin'ny fijerena ny SEM dia mety hohazavaina amin'ny vokatra manintona: Ny teboka avo lenta mety horaisina ho toy ny fitandremana manoloana ny SEM. Ny lohahevitra iray mitodika amin'ny saina dia mety hahasarika kokoa ireo sioka ara-pananahana ao amin'ny Internet izay miteraka fotoana lava be ao amin'ny tranonkala SEM.
38) Fanandramana ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia mifototra amin'ny fomba fiasa momba ny rafi-pitantanana ny neurophysiological (2018)
Ao anatin'ity taratasy ity, misy fomba iray fampiasana famantarana ny atidoha avy any amin'ny faritry ny faritra izay nalaina tamin'ny fampiasana ny EEG dia soso-kevitra mba hahitana raha mety hampidiran-dra ny filokana na raha tsy izany. Izy io dia toy ny fomba fiasa fanampiny ho an'ny fanontaniana ara-psikolojika mahazatra. Ny valin'ny fitsapana dia mampiseho fa ny mpilatsaka an-tsokosoko dia manana hakingan-tseraseran'ny onja maromaro any amin'ny faritra afovoan'ny atidoha raha oharina amin'ireo mpandray anjara tsy mpidoroka. Azo jerena ny fampiasana ny hery spectra izay ampiasaina amin'ny fampiasana tomography electromagnetic Low Resolution (LORETA). Ny tarika theta koa dia mampiseho fa misy ny tsy fitoviana eo amin'ireo mpidoroka sy tsy mpidoroka. Na izany aza, ny fahasamihafana dia tsy miharihary tahaka ny tariky alpha.
39) Zava-manahiran-tsaina ny giro ary manova ny fifandraisana amin'ny toetr'andro ao amin'ny gyrus ara-nofo ambony indrindra eo amin'ny olona manana fihetsika mahatsiravina miteraka olana (2018)
[Fanaparitahana volondavenona amin'ny korteks temporal, fifandraisana tsy dia tsara loatra eo amin'ny cortex temporal sy precuneus & caudate] - Fandinihana fMRI raha ampitahaina amin'ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo ("fitondran-tena mahatsiravina eo amin'ny lahy sy ny vavy") amin'ny lohahevitra mifehy mahasalama. Raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso ny fiankinan-doha amin'ny lahy sy ny vavy dia: 1) mampihena ny volondavenona ao amin'ny lobus temporal (faritra misy ifandraisany amin'ny fanakanana ny filan'ny nofo); 2) mampihena ny precuneus amin'ny fifandraisana amin'ny korteks ara-nofo (mety hanondro ny tsy fetezana amin'ny fahafaha-mifindra); 3) mampihena ny caudate amin'ny fifandraisana voajanahary korteks (mety hanakana ny fifehezana ny impulses ambony ambany). sombiny:
Ireo fandinihina ireo dia maneho fa ny tsy fahampian'ny rafitra ao amin'ny gyrus ara-nofo sy ny fifandraisana ara-pifandraisana mahazatra eo amin'ny gyrus ara-nofo sy faritra manokana (izany hoe ny preuneus sy caudate) dia mety hitarika ho amin'ny korontana amin'ny fanakanana tonic ny firaisana ara-nofo amin'ny olona PHB. Noho izany, ireo vokatra ireo dia maneho fa ny fiovana eo amin'ny rafitra sy ny fifandraisana eo amin'ny sehatra ara-nofo dia mety ho singa PHB manokana ary mety ho kandidan'ny biomarker ho an'ny diagnosy PHB.
Ny fanitarana zavatra mavo ao amin'ny tonsil cerebellar ankavanana sy ny fitomboan'ny fifandraisan'ny tonsil cerebellar havia amin'ny STG havia dia voamarina ihany koa…. Noho izany dia azo atao fa ny fitomboan'ny volan'ny volondavenona sy ny fifandraisana eo amin'ny cerebellum dia mifandray amin'ny fitondran-tena manery ny olona manana PHB.
Ho famintinana, ny fandinihana ny VBM ankehitriny sy ny fiantsoana fampifanarahana dia mampiseho fahasimbana ara-maitso, ary nanova ny fifandraisana ara-pahasalamana eo amin'ny jiro ara-nofo amin'ny olona miaraka amin'ny PHB. Ny tena zava-dehibe dia ny fiovaovan'ny rafitra sy ny fifandraisana eo amin'ny sehatra dia miray tsikombakomba amin'ny fahasosorana PHB. Ireo fikarohana ireo dia manome fomba fijery vaovao momba ny rafi-pitondran'ny PHB.
40) Fihetseham-po manoloana ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto - fampiasana korontana: ny fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy mikasika ny fanoheran-kevitra manimba ny vatana (2018)
[fanamafisana / fanentanana bebe kokoa, faniriana mihombo]. sombiny
Mpanoratra maro no mihevitra ny aretina amin'ny Internet-pôrnôgrafia (IPD) ho aretina mampiankin-doha. Ny iray amin'ireo mekanika izay nodinihina tamim-pahavitrihana tamin'ny tsy fahampian-tsakafo sy tsy fampiasana zava-mahadomelina dia fitongilanana miharihary amin'ireo fiantsoana mifandraika amin'ny fiankinan-doha. Ny fitongilanana fiheverana dia nofaritana ho toy ny fizotran'ny fiheverana ny tsirairay ny fiatraikany amin'ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha ateraky ny fahatsapana ny fahatsapana ny fambara. Heverina ao amin'ny maodelin'ny I-PACE fa amin'ny olona mora voan'ny IPD ny soritr'aretina voarohirohy ary koa ny reactivity sy ny faniriana dia mitombo ary mitombo ao anatin'ny dingan'ny fiankinan-doha. Mba hamotopotorana ny andraikitry ny fitongilanana mitandrina amin'ny fampandrosoana IPD, dia nanadihady santionany tamin'ny mpandray anjara 174 lahy sy vavy.
Ny fitongilanana fiheverana dia norefesina tamin'ny Visual Probe Task, izay nandraisan'ny mpandray anjara fanehoan-kevitra ny amin'ny zana-tsipìka miseho taorian'ny sary vetaveta na tsy miandany. Ankoatr'izay, ireo mpandray anjara dia tsy maintsy nanondro ny filan-dratsin'izy ireo nateraky ny sary vetaveta. Ankoatr'izay, ny fironana mankany amin'ny IPD dia refesina amin'ny alàlan'ny fitsapana fiankinan-doha amin'ny Internetsex. Ny valin'ity fandinihana ity dia naneho ny fifandraisana misy eo amin'ny fitongilanana mitongilana sy ny hamafin'ireo soritr'aretin'ny IPD izay noelanelana amin'ny alàlan'ny tondro ho an'ny réactivity cue-reactivity sy ny faniriana. Raha toa ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny ankapobeny dia tsy mitovy amin'ny fotoana fanehoan-kevitra noho ny sary vetaveta, ny fanadihadiana natao tamim-pahalalana dia nampiharihary fa ny fitongilanana eo amin'ny lahy sy ny vavy dia miteraka tsy miankina amin'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny soritr'aretina IPD. Ny valiny dia manohana ny fiheverana teorika an'ny maodely I-PACE momba ny fahatsapana famporisihana ireo famantarana mifandraika amin'ny fiankinan-doha ary mifanaraka amin'ny fandinihana miresaka momba ny reactivity cue sy ny faniriana amin'ny aretina fampiasana zava-mahadomelina.
Niara-niasa ireo fandinihan-tena ireo:
Ny fiovana ny atidoha lehibe indrindra amin'ny 3 dia mifindra: fanentanana, desensitization, ary hypofrontality.
Ny fampiasana vetaveta bebe kokoa dia mifandraika amin'ny lohahevitra mainty kokoa amin'ny lozam-pitaizana (dorsal striatum).
Ny fitomboan'ny fampiasana sary vetaveta dia mifamatotra amin'ny fampandehanana faribolana kely valisoa rehefa mijery sary vetaveta vetivety.
Ny fampiasana vetaveta bebe kokoa dia mifandraika amin'ny fifandraisana manjavozavo eo anelanelan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny cortex aloha.
Ireo mpitsikera dia nanana hetsika lehibe kokoa ho an'ny siansa ara-pananahana, saingy tsy dia misy loatra ny fiasan'ny atidoha ho an'ny fisavoritahana ara-dalàna.
Fampiasana / fampiasana ny pôrnônika mifandraika amin'ny fihenam-bidy mihoam-pampana (tsy fahafahana manemotra ny fahafaham-po). Ity dia marika amin'ny asa mahomby ataon'ny mpitantana.
60% ny foto-kevitra fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny fianarana iray no niaina ED na libido ambany niaraka tamin'ny mpiara-miasa, fa tsy tamin'ny pôrnôgrafia: nilaza daholo izy ireo fa ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia nahatonga ny libido ED / ambany.
Nihatsara ny fitandremana mitovy amin'ny mpampiasa zava-mahadomelina. Manondro ny fahatsapana (vokatra iray DeltaFosb).
Faniriana & faniriana lehibe kokoa amin'ny pôrnôgrafia, fa tsy ny fitiavany lehibe kokoa. Izany dia mifanaraka amin'ny maodely eken'ny fiankinan-doha - fanentanana fanentanana.
Ny mpidoroka amin'ny pôrnika dia manana safidy malalaka kokoa amin'ny fivarotan-tena ara-pananahana nefa ny atidohany dia nahazatra haingana kokoa ny sary ara-nofo. Tsy misy mialoha.
Ny tanora kokoa ireo mpampiasa ny pôrnôgra no lehibe kokoa noho ny fanehoan-kevitra ao anaty valisoa.
Higher EEG (P300) ny famakiana rehefa nijery ireo sary vetaveta nalefa amin'ny fiankinan-doha hafa).
Ny tsy faniriana hanao firaisana ara-nofo amin'ny olona iray dia mifandray amin'ny sary vetaveta amin'ny sary vetaveta.
Ny fampiasana vetaveta bebe kokoa dia mifandraika amin'ny ambaratonga ambany ambany ao amin'ny LPP rehefa mijery sary vetaveta amin'ny fijerena sary vetaveta: mampiseho ny fahazarana na ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny HPA tsy manara-penitra ary ny fiovaovan'ny tosi-drà ao amin'ny atidoha, izay mitranga amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina (sy ny habetsahan'ny amygdala bebe kokoa, izay mifandraika amin'ny tsindry sosialy).
Ny epigénétika dia miova amin'ny fototarazatra midadasika amin'ny valin-dresaka ataon'ny olona ary mifandray akaiky amin'ny fiankinan-doha.
Ny haavon'ny tontolon'ny tumor nekrose (TNF) - izay mitranga amin'ny fisotroana sy ny fiankinan-doha koa.
Fahamendrehana amin'ny raharaha maitso ara-nofo; Ny fifandraisana mahantra kokoa eo amin'ny sehatry ny orinasam-panjakana sy faritra maro